Amathiphu Kusuka Semalt On Indlela Ukususa Trojan Malware Kusuka Gadget Yakho
Ukuba nekhompiyutha elawulwa yi-virus enonya kungaba yingozi. I-Trojan iyinhlangano enonya engena ohlelweni lwakho lwekhompyutha ngokuthula. Ngemva kokulawula ikhompyutha yakho, iThrojani isebenza ukuqoqa ulwazi oluyigugu elondolozwe ezinhlelweni zakho zokuphepha. Ngokuyinhloko, leli gciwane lingena kukhompyutha yakho uma umsebenzisi wokugcina echofoza ama-pop-ups kanye ne-imeyili. Igciwane le-Trojan lingakwazi ukwabelana ngolwazi lwakho olubucayi njengamabhulogi nemininingwane yasebhange kubaduni ngemuva kokulawula i-PC yakho.
Leli gciwane liphinde liqondise kabusha abasebenzisi bokugcina kumakhasi athile ngokuzibeka ngokwaso njengesiphequluli esizenzakalelayo. Ikhompiyutha enegciwane lesifo seThrojani ihlale ihunyushwa ngokuthi ihamba kancane. U-Ivan Konovalov, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt , ukwabelana ngamasu namacebiso angasetshenziswa ekususeni lolu hlelo kusuka kwikhompyutha yakho.
Amacebo endleleni yokususa iThrojani ngokusongela okubi
Ukusebenzisa i-antivirus evela kunkampani ephethwe phezulu kuzohlale kukuphephile. I-Anti-malware isiza ukuvimbela amasayithi nezinhlelo ezinonya ukuba zifakwe kwikhompyutha yakho. I-Kaspersky, i-McAfee, i-Norton, ne-BitDefender ziphakathi kwezinkampani ezisezingeni eliphezulu ezithuthukisa ama-anti-virus omangalisayo wesistimu yakho. Izinkampani eziningana zinikeza i-antivirus mahhala ikhompyutha yakho. Noma kunjalo, i-premium version ye-anti-virus ikuqinisekisa izinga lokuphepha le-premium.
Izinhlelo ze-Premium anti-virus zinikeza abasebenzisi bokuphela izici ezihlukahlukene ezifana nokuvimbela okukhethwa kukho kanye nokulwa nobugebengu..Ukuze wenze isinqumo esihle ku-unqulo wesi arab ukuze uhambe, izinkampani eziphikisana ne-virus zinikeza isilingo sezinsuku ezingu-30 ukuthuthukisa ukubandakanya komsebenzisi nokunikeza abasebenzisi ithuba lokuxhumana nezinhlelo. Ngaphambi kokulanda i-anti-virus, isici sokuvuselela okuzenzakalelayo kufanele sibe phakathi kwezinto eziphezulu okufanele zicatshangelwe.
Izinhlelo ezikhokhelwayo zokulwa ne-virus zenza izibuyekezo ezizenzakalelayo futhi zenze ukuskena okuzenzakalelayo okuhleliwe ngumsebenzisi wokuphela komshini.
Amasu okunye okukhipha iTrojan kusuka kwikhompyutha yakho
Igciwane leThrojani lingasuswa besebenzisa izindlela ezihlukile. Abanye abanikazi bekhompiyutha bakhetha ukuthatha amakhompyutha abo kuma-PC ahloniphekile izitolo zokukhanda kanye nezitolo futhi basuswe igciwane. Ukuze igciwane lisuswe, ungathatha ikhompyutha yakho kumchwepheshe noma angafika kuwe. Sesha inkampani yendawo ehloniphekile futhi uxazulule izinkinga zakho, uthola lapho bazobuya khona ngesikhathi sangempela.
Igciwane leTrojan eliphambili
Kwezinye izimo, igciwane leTrojan lingase lithuthuke. Kulokhu, umsebenzisi wokuphela komshini ushiywe ngaphandle kokunye ukhetho kodwa ukufometha ikhompyutha. Kulesi simo, umsebenzisi wokuphela ulahlekelwa idatha. Ungaphinda ugcine amafayela akho ku-disk, uphinde uhlole ngokucophelela uma udlulisela amafayela kusistimu entsha yamawindi.
Njengomsebenzisi wekhompyutha, ungabamba i-malware ngokudlulisa amafayela afakwe iThrojani noma ngokumane ulande ifayela ngokungenhloso. Ukulanda isofthiwe yamahhala kwi-intanethi kubangela ingozi enkulu kubasebenzisi bekhompyutha. Ukuphepha kwakho kwe-inthanethi akukwazi ukugcizelela ngokwanele. Ngaso sonke isikhathi cabanga ukufaka i-antivirus evela enkampanini ehloniphekile ukuba uhlanganise nayo yonke isikhathi. Ama-Pop-ups avame ukwandisa izinga lapho amagciwane angena kubasebenzisi bekhompyutha. Gcina ithrekhi yesiphequluli sakho ukuze ugweme ukukhishwa.